Ogo dị elu - Akụrụngwa egwuregwu Haiber (Shanghai) Co., Ltd.
Kedu ihe dị iche na ịdị mma nke egwuruegwu n'ime ụlọ?
Dịka onye nrụpụta ụlọ egwuregwu kacha mara amara na China, anyị nyefere onwe anyị imebe na n'ichepụta ebe egwuru egwu n'ime ụlọ nke na-emezu nchekwa na ụkpụrụ mba dị iche iche.
Haiber na-eji naanị akụrụngwa kachasị mma ma na-agbaso usoro nrụpụta siri ike iji mepụta ebe egwuregwu dị mma, nke na-adịgide adịgide na nke ọma maka ndị ahịa ya. Anyị ji obi anyị niile na-eme ma na-emepụta ngwaahịa dị mma n'ihi na anyị maara etu nke a si dị mkpa maka azụmaahịa ụlọ ebe ndị ahịa anyị nọ.
Yabụ kedu ihe mere ọdịdị ụlọ egwuregwu dị?
Ọ na-aga n’enweghị asị na nchekwa nke ụmụaka kwesịrị ịbụ ihe kacha mkpa n’ebe a na-egwu egwuregwu ọ bụla, ọkachasị n’ebe a na-egwuri egwu n’ime ụlọ. Pụrụ iche na ụfọdụ mba, enweghị ike igwu egwuregwu ime ụlọ ruo mgbe ha gafesịrị nyocha ha. Yabụ, inwe akụrụngwa dị elu bụ nzọụkwụ mbụ iji hụ na nchekwa nke ebe egwuregwu dị.
N'ikpeazụ, ịnwe akụrụngwa ebe ime ụlọ dị elu dị elu ga-ebelata ụgwọ ọrụ mmezi ma hụ na uru dị ogologo. N’aka nke ọzọ, akụrụngwa dị ala na-achọ ndozi mgbe niile, nke na-emezi azụmahịa na-aba uru ka ọghọm. Ngwaahịa dị ala nwere ike ibute ọtụtụ nsogbu nchekwa ma mee ka ndị ahịa kwụsị ntụkwasị obi n'ebe egwuregwu ma kwụsị ileta.
Europeankpụrụ nchekwa nchekwa Europe na north America
Nchekwa ngwaahịa na ogo abụwo ihe kachasị mkpa nke Haiber. A na-eji akụrụngwa egwuregwu anyị kacha mma, a na-anwale ebe egwuregwu anyị ma gbaara ya àmà na ụkpụrụ mba ụwa siri ike (ASTM) site na nchekwa ihe ruo na nchekwa nke ihe niile.
Site na ịgbaso ụkpụrụ ndị a, anyị nwere ike belata ihe ọghọm nke mmerụ ahụ n’ebe a na-egwuri egwu n’ime ma hụ na ha gafere nyocha nke nchekwa mba, mmanye ma ọ bụ afọ ofufo. Ọ na-ewe ahụmịhe dị na ụlọ ọrụ afọ iji ghọta ụkpụrụ nchekwa ndị a yana itinye ego na mbọ iji mejuputa na ịwụnye ha nke ọma na usoro nhazi na nrụpụta.
Kedu ihe dị iche na ịdị mma nke agbụrụ ime ụlọ?
Na mbu lere, ebe egwuru egwu n’ime ulo site na ndi n’icheputa ihe di otu a, mana ha bu ngwootu nke mebiri emebi, ebe n’ile anya n’otutu ebe egwuru egwu n’ime ulo di iche n’ihi ihe di iche, ihe eji emeputa ihe, lebara anya na ntughari ya. Ndị a bụ ụfọdụ ọmụmaatụ nke ihe ị ga-achọ na ezigbo ogige.
Ihe eji eme webusa
Ihe Ndị Dị nro
Ngwa Ngwa Play
Anyị na-eji ọkpụrụkpụ mgbidi tube steel 2.2mm ma ọ bụ 2.5mm. A ga-akọwapụta nkọwa ndị a na nkwekọrịta ahịa ma ndị ahịa ga-eme ka ọ kwado ya mgbe nnabata nke ngwaahịa anyị.
Anyị tube tube bụ ígwè nchara galvanized ígwè. Mgbe ị na-anyụ anyụ, a na-emikpu ọkpọkọ nchara ahụ niile n'ime mmiri zinc a wụrụ awụ. Ya mere, a na-echekwa mmiri n'ime na n'azu ya ugboro ugboro ma ọ gaghị agba nchara ọbụlagodi ọtụtụ afọ. N'ụzọ dị iche, ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-eji usoro dị ọnụ ala karịa dịka "electroplating", nke a na-ejighị igwe rụọ ọkụ na-adịchaghị mma ma bụrụ nke na-adịghị eguzogide nrụrụ ma bụrụ nke a na-ejikarị oge ọ ruru ebe nrụnye.
A na-eji igwe anaghị agba nchara arụ ọrụ nke nwere mmachi okpomoku dị 6mm, nke siri ike ma na-adịgide karịa nke ọnụ ala dị ọnụ ala.
Onye ahịa ahụ nwere ike ịkpụgharị na mwepu aka iji nwalee ịdị mma ya. Nwere ike ịkọwa ihe dị iche n’agbata ogo dị ala n’ihi na ha ga-agbaji na clamps anyị agaghị enwe mmerụ ọ bụla.
Ihe dị iche iche nke clamps enyerela anyị aka ịchepụta ma wuo ọtụtụ ntụkwasị obi na akụrụngwa na-achọ ime ụlọ egwuregwu.
Mpempe ígwè n ’ala chọrọ nkwado ihe nkedo ígwè siri ike, a ga-edozi bolts ahụ n’elu ala ahụ, nke mere na eriri ọkpọ ahụ kwụ otu ebe kwesịrị ekwesị.
Ndị ọzọ na-ebunye ya n’ime ọkpọkọ ụlọ nwere ike ịnọdụ ala n’elu ala, a nwekwara ike itinye ya na eriri plastik, nke a bụ ihe nnọchi maka ihe nkedo ígwè nke ihe dị ọnụ ala na nke dị ala, enweghị atụmatụ nchekwa.
Ebe nchekwa anyị bụ sọks siri ike maka ejiri mpụga, nke na-adịgide karịa ntanetị ndị na-eweta ụlọ ndị ọzọ.
N’akụkụ slide mmiri anyị na-efegharị, anyị ga-edowe ụgbụ mgbochi rịa gburugburu iji gbochie ụmụaka ibulite slide site na ọpụpụ.
Maka ndị ahịa nwere ụkpụrụ nchekwa, anyị ga-eji ụgbụ a na-egbochi ọnya wụnye obere ihe iji gbochie ụmụaka ịbanye na ihe owuwu ahụ ma nọrọ n'ihe egwu.
A na-eji akụkụ osisi anyị niile mere ezigbo osisi. E jiri ya tụnyere ọtụtụ ndị ọzọ na-emepụta ụlọ na-eji ndekọ dị ọnụ ala karịa, nke a abụghị naanị na-adịghị ike, yana n'ihi mmebi nke ọrịa na-adịghị mma nwere ike iji ya ogologo oge.
Ojiji osisi nwere ndị ahịa dị iche iche nwere ihe dị iche iche chọrọ nke steeti ma ọ bụ obodo, anyị nwekwara ike mezuo ihe ha chọrọ, ma jiri nyocha obodo nke plywood.
A na-emepụta ihe mkpuchi PVC anyị niile site na ndị nrụpụta kacha mma na China. Igwe 18 nke ihe eji eme ihe na akwa akwa nke PVC akpụkpọ anụ bụ 0,55 mm, ihe mkpuchi ahụ site na 1000 d kpara naịlọn na-eme ka ọ dị n'okpuru, mgbe afọ ike dịgide na-anọgide n'usoro ịdị nro.
Anyị na-eji ụfụfụ dị elu dị ka ihe mkpuchi maka ngwaahịa niile dị nro, yabụ na ngwaahịa anyị dị nro nwere ike ịnọgide na-agbanwe agbanwe ruo ọtụtụ afọ. Anyị ga-ejikwa ụfụfụ kpuchie kọntaktị niile iji hụ na nchekwa nke ụmụaka mgbe ha na-egwu egwu.
Ngwongwo dị nro na njikọ zip
Ngwunye ụfụfụ nke mkpuchi dị nro bụ 1.85cm na dayameta ọkpọkọ bụ 8.5cm.
Ihe mkpuchi PVC nwere agba dị ọcha ma na-enwu ọkụ ma na-eguzogide ọkụ ọkụ ultraviolet, na-ejide n'aka na ọkpọkọ ahụ na-agbanwe agbanwe na-adịgide adịgide ọbụlagodi mgbe ìhè anyanwụ.
Igwe plastik a na-ahụ anya nke ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-abụkarị naanị 1,600 sentimita ka ọkpụrụkpụ, na ọkpọkọ ọkpọkọ ahụ bụ naanị 8 sentimita. Ihe mkpuchi nke PVC anaghị eguzogide ọkụ ọkụ ultraviolet ma dị mfe iji mee ka agba na-acha. Ihe ntanetị nke PVC n'onwe ya na-emebi emebi ka oge na-aga.
Anyị na-eji ọtụtụ bundling iji dozie ụfụfụ na tube steel. Oghere dị n'etiti nkwado anyị na-abụkarị 15cm ruo 16cm, ebe ndị nrụpụta ndị ọzọ na-ahapụkarị 25cm ka 30cm iji chekwaa ihe na ntinye. Installationzọ ntinye anyị ga-eme ka njikọ dị n’etiti akwụkwọ ikike dị nro na grid n’ụzọ a na-agbakọ agbakọ na ntụkwasị obi, na -ebelata ụgwọ mmezi nke ndị ahịa.
Ugbo elu na steepụ
Anyị nwere akwa nke ịdị elu EVA dị elu na. Okpukpo ahihia a na-enyere aka mee ka ihe ndi ozo di ukwu ma nwee ike iguzogide akwa umu aka wee jigide udi ha ruo ogologo oge.
Gbakwunye ụgbụ nchekwa ozugbo n'akụkụ ubube ahụ iji jide n'aka na enweghi oghere ma ọ bụ oghere dị n'etiti abụọ ahụ na nwa ahụ agaghị akwafu.
A ga-ejikwa mpaghara nchekwa dị n'okpuru ala ahụ wee nwee ebe nchekwa pụọ ​​iji kpuchido ụmụaka, mana ụzọ ga-edobe ndị ọrụ iji banye maka ndozi ya.
Akpa anyị na-akụ ọkpọ jupụtara na spires na ejiri ike kpuchie ya na akpụkpọ anụ PVC dị elu iji nye ha mgbanwe na plọg na elu.
Anyị na-ejikwa ụdọ waya siri ike ma na-adịgide adịgide iji jikọta ya na etiti ahụ. Akpa na-akụ aka nwekwara ike ịbugharị n’enweghị nsogbu n’okpuru eriri eriri pụrụ iche a.
Ejiri akpụkpọ anụ PVC kpuchie mperi waya, nke na-ahụ maka egwu ụmụaka, yana nkọwa zuru oke maka ngwaọrụ ahụ dum.
Akpa mgbochi X
Ejiri njedebe X anyị mee ihe na-agbanwe agbanwe iji mee ka ịrịgo elu na-atọ ụtọ na ihe ịma aka. Ọtụtụ ụlọ ọrụ anaghị eji ihe na-agbanwe agbanwe na njedebe, nke na-eme ka ihe mgbochi bụrụ ihe siri ike ma na-akụda ike. Ihe mgbochi anyị niile dị n’ọhịa juputara na nnukwu owuwe ihe owuwu, nke yiri paụd eji eme ihe maka akwa ụmụaka, nke na-anọ ogologo oge. N'aka nke ọzọ, ọtụtụ ndị ọzọ na-emepụta ihe na-ejupụtakarị ngwaahịa ha na ọtụtụ ihe mkpofu.
The ọkpụrụkpụ na ogo nke EVA n'ala mat nwekwara ekere òkè dị mkpa na ime ụlọ ụmụaka paradise, ezi ala ute na mgbakwunye na mma udidi, mgbe ọkpụrụkpụ na-eyi ndị na-eguzogide dị mma, ezi ala ute nwere ike ime ka ị na-adịghị mkpa iji dochie ala mat.
Usoro nrụnye bụ akụkụ dị mkpa nke iwu ebe egwuregwu dị n'ime. Ofma nke nrụnye ga-emetụta nsonaazụ emechara nke ebe ana-egwuri egwu n'ime ime. Nke a mere eji egwu ime ụlọ ọfụma bụ naanị mgbe etinyere ya ma lebanye ya anya. Ọ bụrụ na etinyereghị egwuruegwu nke ọma, ọ ga-emetụta nchekwa na ogo nke ebe a na-egwu egwu n'ime ụlọ n'agbanyeghị ụdị akụrụngwa ahụ.
Haibei nwere ndi tozuru oke ma nwee ndi okacha amara nke na ano. Ndị ọrụ nrụnye nrụnye anyị nwere nkezi nke afọ 8 nke ahụmahụ egwuregwu nrụnye. Ha etinyela ihe karịrị ụlọ egwuregwu 100 dị na ụwa niile ma soro usoro siri ike iji hụ na arụnyere ha nke ọma, ọ bụghị naanị nchekwa ma na-adịgide adịgide, kamakwa nye ogige ahụ ọdịdị dị mma ma dị mfe ilekọta. Ndị otu nrụnye nke ọkachamara bụ ntọala nke mmesi obi ike nrụnye anyị. N'ụzọ dị iche, ọtụtụ ndị na - eweta ihe ndị ọzọ enweghị ndị nrụnye nke ha, kama wedata ọrụ nrụnye nke ndị ọzọ, yabụ na ha enweghị ikike ịchịkwa ọrụ nrụnye.